» नेकपा सांसदको प्रश्न : मन्त्री र डाक्टरलाई डेंगु, कतिजना सांसदलाई लागेपछि सरकारले थाहा पाउने हो ?
नेकपा सांसदको प्रश्न : मन्त्री र डाक्टरलाई डेंगु, कतिजना सांसदलाई लागेपछि सरकारले थाहा पाउने हो ?
२६ भाद्र २०७६, बिहीबार १४:२६
२६ भदौ, काठमाडौं । देशभर फैलिएको डेंगु नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै सत्तारुढ दलका सांसदहरुले नै सरकारको आलोचना गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको बिहीवार बसेको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै नेकपाका कृष्णगोपाल श्रेष्ठले डेंगुको बारेमा सरकार नबोल्दा अमेरिकाले बोल्नुपर्ने अबस्था आउनु लाजमर्दो भएको भन्दै टिप्पणी गरे ।
श्रेष्ठले स्वास्थ्य मन्त्रीले संसदमा आएर अवस्थाको बारेमा आजै सदनलाई जानकारी गराउन सभामुखको रुलिङको माग गरे । सभामुख कृष्णबहादुर महराले यसबारे आफू बोल्ने बताए ।